Ogow dhammaan faa'iidooyinka miiqyada | Ragga Stylish
Marka nolosha casriga ah ay sii socoto, waxay noqoneysaa mid lagama maarmaan u ah in lagu daro jimicsi jireed nolosheena. Iyo haddii aan dhimannay ama aan aad u deggan nahay oo aan ku nool nahay nolol raaxo leh. Teknolojiyada waxay noo ogolaaneysaa inaan sameyno sida ugu yar ee suurtogalka ah oo aan u dhaqaaqno iyada oo aan loo baahnayn jimicsi jireed. Tobankii sano ee la soo dhaafay, jimicsiyada jimicsiga wax badan ayaa soo hagaagay waxayna kasbadeen xoogaa caan ah. In kasta oo dadka badankood u jeedaan jimicsi ujeeddo bilic leh, ku celcelinta jimicsiga jirku waa caado ama caafimaad. Mid ka mid ah laylisyada ugu tababbarka badan ee lagu gubo kalooriyadaas dheeriga ah ee aan haysanno maalinteenna ilaa maanta waa wareejin.
Qodobkaan waxaan ku baran doonnaa dhammaan faa iidooyinka wareejinta.
1 Wareejinta: tababarka aerobic ama anaerobic?
2 Faa'iidooyinka miiqyada
2.1 Saameyn yar ku leeyahay kala-goysyada
2.2 Waxay yareysaa halista dhaawaca
2.3 Waxay wanaajisaa caafimaadka wadnaha
2.4 Diiqada diiqada
2.5 Waxay ka caawisaa luminta dufanka waxayna kordhisaa kalsoonidayada
2.6 Kaa caawiya inaad si fiican u seexato
2.7 Wuxuu hagaajiyaa adkaysiga
Wareejinta: tababarka aerobic ama anaerobic?
Sidaan ognahay, waxaan leenahay laba nooc oo iska caabin ah marka aan jimicsi sameyno. Ku iska caabinta jirka iyo caabbinta hawada. Miiqyadu waa hawl lagu qabto koox koox isla markaana uu hagayo kormeeraha. Hawshan waxaa lagu fuliyaa baaskiil taagan oo iyagu dan kama laha baaskiilka caadiga ah ee aan dhaqaaqi karin. Waxay leedahay disk aan firfircooneyn oo micnaheedu yahay, xitaa haddii aan joojinno baaliska, waxay sii wadaysaa inay si joogto ah u socoto. Tani waxay naga caawin doontaa inaan wax ka dhigno wax dabiici ah. Intaas waxaa sii dheer, jilibkeena kuma dhegi karno markaan sameyno jimicsiga riixitaanka.
Markaan kahadleyno wareejinta, waxaan ka fikirnaa qabashada shaqada jimicsiga. Taasi waa, u isticmaal layligan inaad ku gubto kalooriyada adigoo adeegsanaya jimicsi xoog leh oo dhexdhexaad ah muddo dheer. Wax la mid ah waxa laga yaabo inay u egtahay in lagu ordo wakhti cayiman. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira kalfadhiyo wareejin ah oo yeelan kara shaqo gebi ahaanba dalbanaya heer wadnaha iyo xididdada, waayo maxaa loo qaadan karaa tababarka anaerobic.
Wareejinta waxaa loo shaqeyn karaa siyaabo kala duwan iyadoo kuxiran ujeedada aan leenahay. Waad shaqeyn kartaa iska caabbinta wadnaha, tababarka xawaaraha ama shaqada muddada u dhexeysa. Waa nooc jimicsi ah oo soo jiidasho leh maxaa yeelay ciddii fulisaa waxay ku dhammaataa daal badan dhidid badan. Waa jimicsi lagu sameeyo muusig xoog badan waana arrin xiiso leh oo dhiirrigelin leh. Xaqiiqda dhammaystirka dhimashadaada ayaa kugu siinaysa dareenka ah inaan gubnay kalooriyo badan sidaa darteed, waan baabi'ineynaa baruurtaas dheeriga ah ee aan hayno.
Jimicsiga noocan ah waxaa aad looga codsadaa xaqiiqda gubida kalooriyeyaasha si loo lumiyo dufankaas dheer ee aan hayno. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira faa iidooyin badan oo wareegaya. Faa'iidooyinka caafimaad iyo deegaankeena nafsiyeed labadaba. Waxaan falanqeyneynaa mid ka mid ah faa'iidooyinka waaweyn ee wareejinta:
Saameyn yar ku leeyahay kala-goysyada
Markaan raadineyno jimicsi jimicsi ama anaerobic ah oo waqti ku qaadanaya, waa inaan tixgelinaa xaqiiqda ah in layligani uusan saameyn toos ah ku yeelanaynin kala-goysyada. Wareegidda saamaynta yar ayay leedahay sidaas darteed waxay naga caawineysaa inaan ka faa'iideysano tababarka oo aan kala-goysyadayagu xanuunsanayn. Ku-dhaqankeeda waxaa lagula talinayaa kuwa la xanuunsanaya arthritis-ka.
Waxay yareysaa halista dhaawaca
Dad badan ayaa ka walwalsan xaqiiqda ah in qolka jimicsigu istaago ama uusan ku sii socon karin xawaareygii uu horey u sameyn jiray. Si kastaba ha noqotee, waxaan diirada saareynaa dhaawacyada suurtagalka ah. Dhaawac ayaa inaga dhigaya inaanan horumar ku filneyn. Taas cagsigeeda, markasta waan fadhiisan doonnaa, horumarkana waan waayi doonnaa.
Si ka duwan sidii loogu ordayay asphalt-ka, qaabkani jimicsiga saamaynta yar wuxuu naga dhigayaa wax yar oo dhaawac ah. Intaas waxaa sii dheer, maadaama ay tahay jimicsi leh dhaqdhaqaaq soo noqnoqda waqti ka dib, waxay ka dhigi doontaa mid ka badbaado badan fasalada kale ee la hago sida aerobics-ka.
Waxay wanaajisaa caafimaadka wadnaha
Waa iska cadahay in haddii aan tababbarno awoodeena wadnaha iyo xididdada aan faa'iidooyin ku yeelan doonno. Miiq-tuurku waa hab wanaagsan oo qalbigeenna uga dhigaysa inay u shaqeeyaan si caafimaad leh.
Way cadahay in hadaan wali sii xoogeysano oo aan xaalufino keydkeena, waxay naga caawin doontaa inaan yareyno buuqa oo aan yareyno xiisadda. Tani waxay ka dhigeysaa ikhtiyaar wanaagsan oo lagu dhaqmo ka dib shaqo maalmeed adag. Dadkaas ka shaqeeya 8 saacadood xafiiska waa ikhtiyaar aad u xiiso badan. Jawigayaga hormoonnada ayaa gacan ka geysanaya yareynta heerarka 'cortisol', hormoonka xakameynaya walaacayaga.
Waxay ka caawisaa luminta dufanka waxayna kordhisaa kalsoonidayada
Fadhiga wareejinta waxaan ku gubi karnaa kalooriya badan iyadoo ku xiran hadba sida aan u shaqeyno iyo inta aan dheereyno. Waa suurtagal in lagu gubo illaa 700 oo kaloori hal kulan oo keliya. Tababbarka noocan ahi wuxuu innaga keenayaa inaan gubno kalooriyo badan inta lagu jiro kalfadhiga iyo weliba jimicsiga ka dib.
Si loo gubo kalooriyo badan Waxaan kaa caawin doonnaa sidii aan u abuuri lahayn khasaaro nafeed in, ay weheliso cunto, waxay naga caawin doontaa inaan lumino dufanka. Waa in aynaan iloobin in cuntadu ay tahay aasaaska dufanka oo yaraada. Haddii dhammaan kharashyadayada tamarta ah ee dhammaadka maalinta aysan ka yarayn isticmaalka kaloriinta ee loo maro cuntada, iyadoo aan loo eegin inta wareegga ah ee aan sameyno, ma lumin doonno dufanka.
Marka la eego isku-kalsoonaanta, haddii ay naga caawiso inaan lumino dufanka, waxaan horumarin doonnaa jirkeenna. Tan waxaa weheliya kordhinta isku-kalsoonaanta adoo naftaada ka dareemaya wanaag oo kaa caawinaya inaad si wanaagsan u ekaato.
Kaydinta keydkeenna tamarta waxay naga caawinaysaa inaan si fiican u seexanno. Intaas waxaa sii dheer, inta lagu jiro jimicsiga wareejinta hormoon la yiraahdo serotonin ayaa la sii daayaa, kaas oo mas'uul ka ah dhiirrigelinta niyadda. Serotonin waxay kaloo taageertaa soo saarista melatonin, oo ah hormoonka la xiriira hurdada. Sidaa darteed, sameynta kulan wareegaya waqti kabadan ama kayar waqtiga jiifka ayaa noqon kara ikhtiyaar wanaagsan.
Wuxuu hagaajiyaa adkaysiga
Thanks to jimicsi joogto ah iyo farshaxan xoog leh ayaa naga caawinaya hagaajinta aerobic iyo iska caabbinta anaerobic labadaba. Waxaan sidoo kale ku kasban karnaa saameyn dammaanad ah kordhin murqaha muruqeena, quadriceps, weylaheenna iyo ciilkeena.
Sida aad u aragto waxaa jira faa iidooyin fara badan oo wareegaya. Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan uu kugu dhiirigelinayo inaad sameyso jimicsiga noocan ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Fitness » Faa'iidooyinka miiqyada